Kedu ihe bụ isi nke njikarịcha search engine maka isiokwu?
Taa, anyị ga-ekwurịta banyere isi ihe SEO maka isiokwu, bụ ọdịnaya, koodu, na ntụkwasị obi. Ihe atọ ndị a bụ isi echiche nke ọganihu SEO ọ bụla ịga nke ọma.
Gụọ na ịghọta otú ị ga-esi dee ọdịnaya nke na-abụghị nanị maka kachasị maka engines na-achọ ma na-adọrọ mmasị ndị mmadụ. Ntre, nso ikpere.
Ihe niile na - agbanwe gburugburu ọdịnaya
Ide ihe nyocha njikwa search:
. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ederedeghị ederede HTML na ibe weebụ, enwere ohere maka akụ iji nweta ọkwa dị elu na Google. Dị ka ị maaraworị, engines ọchụchọ apụghị ịgụ ihe ha na-apụghị ịhụ.
Inweta ederede HTML bụ ihe mbụ spiders search engine na-eme mgbe indexing a website. Ozugbo ha mere nke ahụ, ha nwere ike ịgụ ngwa ngwa ma ghọta ọdịnaya gị. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịkwado elu na search engine nke Google, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ka ị hụ na ị ga-echekwa isiokwu gị na ibe weebụ niile.Tụlee ịtụkwasị isiokwu n'ime edemede na edemede akụkụ nke ibe weebụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, mesie ọnụọgụ abụọ dị iche iche ike site n'ịkọwapụta ya, ịkọwapụta ya, nkwuwa okwu ma ọ bụ ịtụgharị uche na ọdịnaya ndị ọzọ dị mkpa.
Ịdị mkpa nke ntinye maka SEO
N'ihi na ndị nledo search engine nwere nsogbu na ụfọdụ asụsụ mmemme, ị ka mma ịhazi saịtị gị na Ụkpụrụ Weebụ a nabatara nke ọma. Ndị ọkachamara na elu ugwu na-agbaso "echiche dị ala" karịa. E wezụga ịmepụta maka spiders, uru nke usoro iwu Weebụ-ihe enyemaka dị mma bụ na ọ ga-enwe ike ịnweta ntanetị nke nchọgharị na njikọ ọsọ ọsọ, ime ka ahụmahụ ndị ọrụ.
Ụzọ ọzọ ị ga-esi mee ka koodu ịntanetị gị maka SEO bụ site na ịhụ na ọ bụla otu peeji nwere isiokwu-kachasị aha mkpado aha, mkpado nkụnye eji isi mee, mkpado meta na mkpado elu.Cheta na isiokwu ndị ị ga-etinye na ha kwesiri ịbụ otu ihe ahụ ị lekwasịrị anya maka ozu ahụ na ibe ahụ.
Ihe ọzọ dị oke mkpa ị ga-aghọta bụ otu nnukwu ụlọ ọrụ ọchụchọ si achọpụta ebe saịtị nke puku kwuru maka otu okwu. Cheta, ọbụlagodi na ị na-agbaso ndụmọdụ ndị dị n'elu, na ibe ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ihe omume kwesịrị ekwesị nke okwu ahụ kpọmkwem, na URL na mkpado dị na koodu isi iyi kachasị mma maka okwu a, ị ka nwere ike ghara igosi n'elu Nchọta Google.
Iji kwalite asọmpi ahụ, ị ​​ga-elekwasị anya na ịmepụta mmetụta nke ịtụkwasị obi na njinchọ ọrụ ahụ. Ụzọ kachasị mma iji ruo ihe mgbaru ọsọ na-esonụ bụ iji nweta njikọ sitere na saịtị ndị dị mkpa na-arụ ọrụ ma: ma ewu ewu ma hụ anya na ọchụchọ gị. Ọ na-arụ ọrụ dị ka ndị a: mkpokọta weebụ bara uru nke na-ejikọta gị, nke dị elu na njikọta gị na Google.
Ogoro gị nwere ike ime ka nlezianya nyocha na ego nweta ego ugbu a na ị ga - ihe nzuzo atọ nke njikarịcha search engine maka isiokwu: ọdịnaya, koodu, na ịtụkwasị obi Source .